ဒီနေ့တော့သမီး ရဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန် မှာ ပြောတဲ့ သမီး ရဲ့ မိန့်ခွန်းကိုနားထောင်မိတယ်…။
Deforestation, Toxic air pollution, Insects and wildlife extinctions ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ သမီး ငိုတော့တယ်…။ ပါလီမန် တစ်ခု လုံး လည်းတိတ်ဆိတ်လို့…။
သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးတာ…. လေထု ထဲ မှာ အဆိပ်တွေပျံ့လွင့်နေတာ …အင်းဆက်တွေ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် တွေ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ် တော့မဲ့ အရေး ဟာ နီးကပ်လို့ လာပါပြီ သမီးရေ..။
ပျားလေးတွေကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့..။ သူတို့ လည်း စိုက်ခင်းထဲ မှာ ပျော်တယ်…။
စိုက်ခင်းထဲကသီးနှံ တွေအတွက် ဝတ်မှုန်ကူးပေးတယ်…သို့သော် စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်က မွှန်ထူနေအောင်ဖြန်းတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး ပေါင်းသတ်ဆေး အမှုန်အမွှားတွေအောက်မှာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်ရမဲ့ဘဝကို ရောက်ရရှာတော့မယ်…။
သူတို့ ချိမ်းခြောက်တဲ့ စကားကိုအန်တီ့သင်တန်း တွေ မှာပြောပြတယ် သမီးရေ..( If I die , I will bring you )တဲ့..။ ငါတို့မျိုးတုန်း တဲ့တစ်နေ့ သင်တို့လူသားတွေကိုပါခေါ်သွားမယ် တဲ့သမီးရယ်..။
အန်တီ ဟိုနေ့ကတော့ သမီးအရွယ် ထက် ငယ် တဲ့ ၁၀နှစ်သမီးလေးက ရေးထားတာလေးGoogle မှာတွေ့တယ် သမီး…သူက ပိုလာ ဝက်ဝံလေး တွေကိုချစ်တာကိုး…။
မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်တာတွေ လျှော့ ကြပါတော့ မီမီး ပိုလာဘဲလေးတွေကိုသနားလို့ ပါတဲ့.... ကာတွန်းလေးဆွဲထားရှာတယ်..။
ကမ္ဘာ့အပူချိန်တိုးလာ တာနဲ့အမျှ…ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ( Polar Bear)တွေ ရဲ့ နေထိုင်ကျက်စားရာ ရေခဲပြင် တွေ တစ်ဝုန်းဝုန်းပြိုဆင်းနေတာ တွေ သူကြားသိလို့ ထင်ပါရဲ့ သမီးရယ်..။
သမီး မိန့်ခွန်းထဲကလိုပါပဲ..။ အချိန်ဖြုန်း မနေကြပါနဲ့ တော့ အခု အချိန်ကစပြီး မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို ရပ်တန့် မဲ့..လျှော့ချနိုင်မဲ့ကိစ္စတွေမြန်မြန် လုပ်ကြပါတော့ လို့ သမီးလေး အံကြိတ်ပြောတယ်..။
(Climate Change)ရာသီဥတု ပြေင်းလဲ တာ…( Global Warming)ကမ္ဘာ ကြီးကို ပူနွေးလာတာကြောင့်၊ ပူနွေးလာတာ က တော့အဓိက မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ဆိုတာ သိတဲ့လူ အန်တီတို့ တိုင်းပြည် မှာ နည်းတယ် သမီးရယ်..။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ရယ် ၊ မီသိန်းရယ် ၊ နိုက်တြပ်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ ဟာ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ( Greenhouse Gas) တွေ ဖြစ်တယ်..။
Greenhouse Gas Emission ကို Carbon Emission လို့လည်းခေါ်ကြတယ်…။သူတို့ ဟာ ကမ္ဘာ မြေ ရဲ့ လေထု ( Atmosphere ) ၁၀ကီလိုမီတာအတွင်း မှာ အုံဖွဲ့ နေကြတယ်…။ အဲဒီအခါ နေရောင် နဲ့ အတူပါလာတဲ့ အပူ ဟာ လေဟာနယ်ကို ပြန်မထွက်နိုင်ကြတော့ဘူး…။
အအေးပိုင်းဒေသမှာ အပူပိုင်းသီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးလို့ လိုတဲ့အပူရအောင် မှန်လုံအိမ် ဆောက်ကြတဲ့ သဘောမျိုး နဲ့တူလာလို့…. ဒီဓာတ်ငွေ့တွေကို မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဟိုးအရင် အန်တီတို့ငယ်ငယ်တုံးကတော့ ဒီဓာတ်ငွေ့ တွေကို ပြန်လည် အသုံးပြု စုတ်ယူမဲ့ သစ်ပင်သစ်တောတွေ ရှိခဲ့တာ မို့ သဘာဝ မျှခြေ Natural Balance ရှိခဲ့တယ်…။ အခုတော့ ထုတ်တာများ ပြီးစုတ်တာ နည်းခဲ့ပါပြီ သမီးရေ..။
ဒါကိုမူတည်ပြီး Carbon Foot Print, Carbon Tax, Carbon Compensation တွေ အကြောင်းကတော့ အန်တီက သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး မှာ သေချာသင်ကြားပေးတယ် သမီးရယ်..။
သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး မှာ နိုက်တြပ်အေက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ ထွက်စေတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာတွေ မသုံးဘူး ..။ Nutrient Recycling လုပ်စေတယ် ..။Biodiversity ကို အဓိကထားထိန်းသိမ်းစေတယ် သမီးရေ..။Microbial Activities ကိုတိုးတက်စေပါတယ်..။
အန်တီတို့ သြဂဲနစ် ခြံ ဟာသီးသန့် ဖြစ်တဲ့ဂေဟ စနစ် Isolated Eco-system အဖြစ်ဖန်တီးရပါတယ်…။ အင်းဆက်တွေကို ….ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့ နင်လည်းသက်ရှိ…ငါလည်းသက်ရှိ..နင်လည်း ရှင်သန် လိုစိတ်ရှိတယ်…။ နင်လည်း ကမ္ဘာကြီး မှာနေချင်တယ်..ငါလည်းနေချင်တယ်… ငါတို့ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင် အတူနေကြမလဲ ဆိုတာ ..အန်တီတို့ သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး ရဲ့ တရားမျှတမှုရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါသမီးရေ..။
ဒီတော့ Crop Diversification (အမယ် စုံစိုက်ပျိုးရေးတွေ ) ၊ အင်းဆက်ဆွဲဆောင်တဲ့ အပင်တွေ ( Insectaries )တွေကို ဒီဂေဟ စနစ်မှာ ပါအောင်ထည့်ခိုင်းရတော့တာပါပဲသမီးရယ်..။
သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့တွေမှာ မျိုးစေ့ပွဲတော် လေးတွေ လုပ်ပေးတယ်…။ သင်တန်းပြီး တိုင်းသစ်ပင် စိုက်ပါမယ် ဆိုတဲ့ကတိကိုတောင်းတယ် သမီးရယ်…။
အန်တီတို့ မြန်မာက တောင်သူတွေ က စားသုံးသီးနှံတွေ ကို တော့စိုက်ရမယ် တွေးတယ်…။
သစ်ပင်သစ်တောတွေကိုတော့ခုတ်ရမယ် လို့ ခံယူကြတယ်…။ သစ်တော တွေက ငါမခုတ်လည်း တခြားသူ ခုတ်မှာ ပဲ တွေးကြတာ များ ပါတယ်…။
မြန်မာက ကျေးလက်ဒေသ တွေ ဟာ ထင်းကိုမှီခိုနေရဆဲပါပဲ သမီးရယ်..။ အနာဂတ်လောင်စာ အတွက် ထင်းစိုက်ခင်းတွေ စိုက်ဘို့ တတ်နိုင်သမျှတောထဲက သစ်ပင်တွေမခုတ်ဘို့ ပြောတော့…. အန်တီ့တောင်သူတွေ မျက်လုံးလေးတွေ ဝိုင်းနေတော့တာ ..။
သဘာဝ ရေထွက်ကလေး တွေ နဲ့ စိုက်ပျိုးရတဲ့ တောင်ရိုး၊ ပအိုးဝ် တိုင်းရင်းသားတွေ ဆိုတော့ ရေထွက် ပျောက်ရှမှာ ကြောက်လှရှာပါတယ်..။
နောက်တစ်ခု သတိထားမိတာ သမီးတို့နိုင်ငံကပညာရေး…။ ဒီ Climate Change , Global Warming အကြောင်းကို သမီး ၈နှစ်သမီးမှာ သင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ အန်တီသိလိုက်ရတယ်…။ သိရပြီး ကတည်းက သမီး သိပ်ကြောက်မိတယ်…။
ဒီချောက် အိပ်မက်တွေ မက်နေခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လူကြီး မှ လည်းထိထိရောက်ရောက် မလုပ်ဆောင်ကြတော့ ..သမီး ခံစားမှု အထွဋ်အထိပ် ရောက်ခဲ့ရတာ…. အန်တီကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်ကလေးရယ်..။
ဒီတခါ အန်တီထိရှခဲ့တဲ့ စကားလုံး ကတော့ လူ ကြီးတွေကိုသမီးပြောပြီ….
You are burning our Future တဲ့..။
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ အနာဂတ်ကိုရှင်တို့ မီးလောင်တိုက် သွင်းနေကြတာလား တဲ့..။ဥရောပ သမဂ္ဂ က နိုင်ငံရေးသမား တွေကိုရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ပြောလိုက်တာ.... ။
အန်တီလည်းပြော ချင်မိ နေပါပြီ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:20 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သမီးဂရီတာ သို့ပေးစာ (၂)
ချစ်သော သမီးလေး ဂရီတာ…
ဒီနေ့ မနက်တော့သမီး ရဲ့ တိုင်းပြည် ဆွီဒင်က TEDx စတော့ဟုမ်း မှာ သမီးပြော ခဲ့တဲ့ ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းကိုဖွင့်ပြီး အန်တီနားထောင်မိတယ်…။
TEDx Stockholm က လွတ်လပ် တဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်တယ် အမြတ်အစွန်း မယူ ပဲ သိသင့်သိထိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုပြည်သူကြားကိုပြန့်နှံအောင် Conference တွေ လုပ်ပေးတယ် အသံတွေ လွှင့်ပေးတယ် ပေါ့..။
သမီးရေ….ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင် တွေဟာ စကားပြောကောင်းသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်…။
စကားလုံး တွေဟာ ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သလို ကမ္ဘာ့သမိုင်း တွေကိုတောင်ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ် ဆိုတာ အန်တီငယ်ငယ် ကကျက်ခဲ့တဲ့ Winston Churchill ‘s famous speech ကိုသတိရမိတယ် သမီးရယ် ။ စကားပြောကောင်းတဲ့နောက်မှာ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက် တွေရှိတယ်..။
လူတွေ လေးစားတယ် ဆိုတာ အပြော နဲ့ အလုပ် တစ်ထပ်ထဲကျကြလို့ သာလေးစားကြတာပါ..။ သမီးလေးဟာ ဆွီဒင်က မိခင် ဘာသာဖြစ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုလေယူလေသိမ်းမှန်မှန်…..အသံထွက်မှန်မှန် လိုရင်းတိုရှင်း ပြောသွားတယ်…။
အတွန့်ချိုးနေတဲ့ မျက်မှောင်နှစ်ဘက် ဟာ အလွန်တရာလေးနက် နေတယ်…။ ဒီ ကာလတွေ မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို ကျသွားလို့ ပိန်သွယ် သွားတဲ့သမီးလေး ကိုကြည့်ပြီး အန်တီငိုချင်မိတယ် ကလေးရယ်…။
Climate Change ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုသမီးသိခဲ့တာ သမီးအသက် ၈နှစ်ကတည်းကဆိုတော့အခု ၁၆နှစ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်လေ့လာခဲ့တယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတယ်… ခံစားချက်နဲ့ ယှဉ်တဲ့လေ့လာမှုတွေ ပေါ့နော်..။
သမီး ပြောတဲ့အထဲ မှာ အဲဒီအချိန်ကတည်းက သမီးဟာ မီးတွေ မလိုရင်ပိတ် တယ် စွမ်းအင်တွေချွေတာဘို့ တဲ့..။ Recycled Paper တွေပဲသုံးတယ် သဘာဝ သယံဇာတ တွေ ကို စောင့်ရှောက်ဘို့ တဲ့..။
သမီးကိုလေးစား တဲ့အနေနဲ့ ဟိုတယ် က အဲကွန်းရယ် မလို တဲ့မီးတွေ ထပိတ် မိတယ်..။ညကလည်းမဖွင့် မိပါဘူး ခဏမျှသာ ..
Instead of looking for Hope, Looking for action ဆိုတဲ့စကားလုံး ကတော့တိကျ တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုထောက်ပြခဲ့တယ်..။
မျှော်လင့် မနေနဲ့..ထသာလုပ်လိုက်တော့ ဆိုတာ ..အမှန်ပဲသမီးရေ..။
သမီး ပြောတဲ့မိန့်ခွန်း ထဲ မှာ တစ်နေ့ကိုမျိုးစိတ် ၂၀၀ ပျေက်ဆုံးနေတယ်200 Species extinct in single day ဆိုတာကတော့အန်တီ့ ဘာသာရပ် နဲ့ ဆိုင်နေပြီ သမီးရေ…။
အန်တီ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ဘာသာရပ်ဟာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးရေးကို ကယ်တင်ဘို့ ၊ အစားအစာ ဝဝလင်လင် စားသုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းကြဘို့ အန်တီ တို့သင်ယူခဲ့တယ်…။
အခု စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးဟာ လိုအပ်တာ Need ထက်ပိုတဲ့ လောဘဇော တိုက်မှု Greed တွေ ဖြစ်လာ တဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက် ဆီးတဲ့ဘာသာဖြစ်နေမှာ အန်တီ တော့တကယ် ပဲစိုးရိမ်လှတယ် ..။
၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ WHO ကနေ ပေါင်းသတ်ဆေး သည် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံ ရဲ့ Environmental Protection Agency EPAက သဘာမတူဘူးသမီးရေ..ပေါင်းသတ်ဆေးဟာ ကင်ဆာ မဖြစ်စပါဘူးလို့ ဇွတ်ညင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
ဒါဆို သောက်ပြမလား လို့ မေးတဲ့လူတွေ လည်းရှိပါတယ်…။EPA နဲ့ ဒါတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Monsanto ကုမ္ပဏီ အနေအထားဟာ လင်မယားလိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတယ် ဆိုတာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ သိကြတယ်..သို့သော်မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး ..။
ထားပါတော့ကင်ဆာ မဖြစ်ဘူး…ဆိုသော်လည်း… အဘိုးတန် တဲ့ အပင်မျိုးစိတ်တွေ ပျောက်ကုန် တာကတော့ညင်းမရဘူးသမီးလေးရေ..။
အန်တီငယ်ငယ် က ချစ်ခင် ခဲ့တဲ့ လယ် တော…ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတာ
မှိုနတိုငွေရောင်ဖျော့ရယ် နဲ့..ရွှေကနဖော့ ကြာရိုးဖြူ…
ချိုးယူ လို့မကုန်ခမ်း..ပတ္တမြားရောင် ဖားကဖောင်သံလွင်လွင် နဲ့
ရွှေညံပင်ရှုပ်မရှင်းတယ် ကွင်းပြည့်ခမန်း … ။
ဆိုတဲ့ကဗျာ လေး အတိုင်း ချစ်စဖွယ် ကျေးလက်အစားအစာတွေပေးတဲ့ အပင်လေးတွေ ပျောက်ကုန်ပြီ သမီးရယ်..။မသိလို့ စားကြသူတွေလည်းအဆိပ်တွေသင့်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာကိုကြားရတာတွေကတော့ နားနဲ့မဆန့်အောင်ပါ..။
ဒီပေါင်းသတ်ဆေး အောက် မှာ ရေနေသတ္တဝါတွေ ဘယ်လောက်ပျောက်အုံးမလဲ အန်တီ စိုးရိမ်လှ ပြီ..။
အန် တီတို့မြန်မာက ဒီဆေးရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ကတော့ ပေါင်းသတ်ဆေးကို ပိတ်ပင်တဲ့နိုင်ငံ တွေ ကို ပေါင်းပြဿနာ ကြုံရမယ် လို့ တောင်ချိမ်းခြောက် တဲ့သတင်းတွေ ဖေါ်ပြပေးနေတယ်…။
ဒီနေ့ အန်တီ ရောက်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် က ပအိုးဝ်တောင်သူ တွေ သြဂဲနစ် စနစ်ကူးပြောင်း ပေးဘို့ သင်တန်းမှာ ကလည်းအဓိက အခက်အခဲ ကပေါင်းသတ်ဆေး သုံးစွဲမှုသာဖြစ်နေတယ်…။
တစ်ပုလင်း မှ ၈၀၀၀ ဆိုတော့ လည်း သုံးကြတော့တာ...။
လိုအပ်လို့ လားပေါင်းပေါက်ရမှာ ပျင်းလို့ လားဆိုတာကိုတော့ .......
အရာရာခံဘက်က ဖြစ်နေတဲ့ အခြေခံလူတန်းစား တောင်သူတွေမို့ အန်တီမမေးရက်တော့ပါဘူးလေ..။
၁၀ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မြို့ ကိုတောင်မသွားကြတဲ့သူတွေလက် ထဲအရောက်ဘယ် သူတွေ အလွယ်တကူ ထည့်ပေးနေလဲ..။
နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကိုတကယ် ပဲမသိကြတာလား..မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြ တာလားအန်တီ အော်မေးနေမိတယ် သမီးရေ..။
ဒါတောင်ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရှာတဲ့ ပျားလေးတွေ ၊လိပ်ခုံးကျိုင်းလေးတွေ ၊ နကျီလေးတွေ မပါသေးဘူး..။
မြေ ထဲက အဘိုးတန် အဏုဇီဝ မျိုးစိတ်လေးတွေမပါသေးဘူးနော်..။
ဒါတွေဟာ ဥပဒေကိုင် ထားတဲ့သူတွေ တစ်ချက် လက်မှတ်ထိုးဆုံးဖြတ် ရုံ နဲ့ ပြီးရမဲ့ကိစ္စ တွေ မှာ ........ မပြီး ကြတဲ့အခါ ..။
အန်တီလည်းသမီး လိုပဲ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ချင်မိတယ် သမီး.။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:07 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သမီး ဂရီတာ သို့ ပေးစာ (၁)
ဆွီဒင် နိုင်ငံ က ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် စာသင်ခန်း တံခါးတွေ ကနေထွက်ပြီး ရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သမီးလေးရေ..။
သမီးလေး ရဲ့ စကားလုံး တွေဟာ စူးရှ.... မြိမြ နေတဲ့ လှံတွေ လို အန်တီ့ရင်ထဲ .... ထိခိုက်ခံစားရတာ....ကြာခဲ့ပြီသမီးရေ...။
စိမ်းလန်း ရာကနေ ခြောက် ကပ်.... ခြောက်ကပ် ရာကနေ လောင်မြိုက် တော့မဲ့ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ လားရာကို တွေးမိ တိုင်းခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ရတယ်...။
ISO 140767 တွေ...Carbon Tax , Carbon Foot Print တွေ အန်တီ သင်ကြားပေးတိုင်း...
International Business အတွက် ကို စဉ်းစား တဲ့သူတွေ များလှ ပါတယ်.....။
ရင်ဝလှံစူး...ထိပ်ဦးမီးလောင်သလို ထိန်းသိမ်းရေး ၊ ရေရှည် တည် တံ့ရေး အတွက် တုံ့ ပြန်ဆောင်ရွက်သူရှားလှတယ် သမီးရယ်..။
“လူကြီးဆိုတဲ့ သူတွေရယ်... ရှင်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ကျမ မလိုချင်ပါဘူး။ ရှင် တို့ကို အများက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ စောင့်စားမှုကို ခံ နေရတဲ့သူတွေလည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ကျွန်မ ရှင် တို့ကို ကမ္ဘာကြီးရှေ့ရေးအတွက် စိုးရိမ် ထိတ်လန့် စေချင်တာပါ။
လူကြီးမင်းတို့အိမ်ကို မီးလောင်နေရင် ဒီလို ဘယ်နေပါ့မလဲနော် ။ ချက်ချင်း ကြောက်လန့်တကြား တုံ့ပြန်ကြ မှာနော် ..။
အခုကမ္ဘာကြီး အခြေအနေက အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေလို့ပါ။”
သမီး နောက်က လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ် သမီး ရေ...။..
မနေ့က ပြည်က နေအိမ်ပြန်ရောက် တော့ ည ၁၂နာရီ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့ ဟိုပုန်းကို ထွက်လာခဲ့တယ်...။
အန်တီ ...စိတ်မှာ Panic ဖြစ်ပြီး ကြိုးစားပါ့မယ်...။
မှန်လုံအိမ် အာနိသင် ကိုမီးထိုးပေးတဲ့အလုပ်တွေ ရှိနေတယ် သမီးရေ..။
အန်တီတို့ မြန်မာက စိုက်ပျိုးရေး မှာ သီးနှံတွေ မီးရှို့ကြတယ်..သစ်တောတွေ မီးရှို့ တယ်...။
Carbon Sequestration ဖြစ်ဘို့ ပြောပြရတယ်... မြေဆွေးတွေ လုပ်ဘို့...။ အဟာရဓာတ်တွေ လေလွင့်မှု မရှိ ပဲ ပြန်အသုံးချဘို့..။
မြေဆွေးသုံး ပြီး ရေထိန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မြေဆီလွှာ တည်ဆောက်ဘို့..။
ဒေသ မျိုးစိတ်တွေ ထိန်းသိမ်းဘို့...တတ်နိုင်သမျှ တင်ပို့ လာတဲ့ အစားအစာ တွေ လျှော့ချ စားသောက်ဘို့..။ ကြိုးစား ပြောပြပေးနေတယ်...။
အန်တီတို့စိုက်ပျိုးရေး မှာ နိုက်တြိုဂျင် မြေသြဇာ တစ်တန်ရဘို့ ဆိုရင် လောင်စာဆီ ၈၀၀ ကနေ ၁၂၀၀ လီတာ သုံးစွဲ ရတယ် သမီးရေ..။
ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ် မှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထွက်ပြီး...မြေ ထဲသုံး လိုက် တဲ့အခါ နိုက်တြပ်အောက်ဆိုဒ် ထွက် ပြန်ရော..။
ကြာရှည်သုံးစွဲရင် မြေချဉ်လာတယ်.... သူကအငွေ့ ပျံတော့ ဆာလ်ဖာ နဲ့ ဇင့်ကို သယ်ဆောင်သွား လို့ မြေကချို့ တဲ့ ပြန်သေးတယ်...။
ဒီတော့ သဘာဝ က စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ ကိုမလေလွင့်စေပဲ မြေသြဇာ အဖြစ်ပြန်လည် အသုံးပြု ရေးအတွက် စိတ်အမြင်တွေ ပြောင်းစေခဲ့တယ်...။
သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး မှာ ပိုးသတ်ဆေး တွေ မသုံး ပဲ
Natural Preventive Mechanism
Physical Preventive Mechanism
Bio Preventive Mechanism တွေ သုံးထားပြီး ဇီဝမျိုးကွဲ တွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရတယ် သမီးရေ..။
နောက် အန်တီတို့ နိုင်ငံက ပေါင်းသတ်ဆေး တွေ သုံးကြတာ.... စိုက်ခင်းထဲ...ကန်သင်းထဲ... အခု ဆို လူမှု ဘဝ ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ထဲထိ ရောက်နေပြီ သမီးရေ...။
သမီးက မီးလောင်တဲ့အခြေအနေ ကိုထောက်ပြတယ်.... ။
အန်တီကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို မီးလောင် နေတာ အပြင် အဆိပ်သင့်နေတာ ကိုပါမြင်နေရတော့ မခံစားနိုင်တော့ဘူးသမီး..။
ဒီမှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု(Cabon Emission ) ဟာ ၁၅ နှစ်သမီးလေးတောင်နားလည် ပါတယ် လို့ သမီးကပြောခဲ့ပေ မဲ့..
အန်တီတို့ မြန်မာ မှာတော့ သစ်ပင်တွေ ခုတ်ကောင်းဆဲသမီးရေ...။
ဆေးမျိုးစုံ မွှန်ထူ နေတဲ့ စိုက်ခင်းတွေ.......
မြက်တောင်ချမ်းသာမပေး လို့ ဝါထိန် လောင်မြိုက် နေတော့တာ...။
သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေ ကိုလည်းငွေ နဲ့ လဲလှယ် ကြမဲ့ သဘောဆိုတော့ အနာဂတ် ကလေးတွေ အတွက် ဆို တဲ့စကားလုံး က စကားသာဖြစ်ပြီး
မှားနေတာ ကိုတော့ရိပ်မိခဲ့ပါတယ် သမီး..။
အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် အတွက်အမွေ ဆိုတာ ...ငွေ ရှာသူ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ စွာသုံးစွဲ သူတွေ တကယ် တွေးမိမယ် မထင်ပါသမီးရေ..။
ဒီတော့ ဒီ အသိုင်းအဝိုင်း ထဲက
လူကြီးတွေ နားလည်အောင် ကြိုးစားနေရပါတယ်...။
((ကျွန်မ တို့ဟာ လူ့သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံးဘေးဒုက္ခကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ရောက်နေပါပြီ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ဘာမှ လုပ်နြေ
ကတာ မရှိသေးပါဘူး။)) ဆိုတဲ့ သမီးရဲ့ ပြတ်သားမှု ရဲရင့်မှုကို အန်တီ အားကျ အတုယူ ရပါအုံးမယ်။
သမီးဆီက ခွန်အားတွေ စီးဆင်းလာဘို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ် သမီးရေ...။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့..... အန်တီတို့ဟာ....
မိုးကုတ် စက်ဝိုင်း တစ်ခု ထဲအောက် မှာ...
နောက် ထပ်နေစရာ...ကမ္ဘာ အပို တစ်ခု မရှိပဲ အတူတူ နေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတွေ ဖြစ်လို့ ပဲသမီးရေ..။
သမီးတောင်းဆို သလို Panic ဖြစ် ဘို့ ကြိုးစားနေကြာင်းဆက်ရေးပါအုံးမယ် သမီးရေ...။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:17 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် Greta Thunberg